Global Voices teny Malagasy » Iran: Nandoro Tobin-tsolika Ireo Mpanao Fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Jona 2017 19:31 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana
Misy ny vaovao nipoitra tao amin'ny IIna  [Fa], masoivohom-baovao Iraniana momba ny Asa, nitatitra fa nisy olona namoy ny ainy tao Yasouj , faritra atsimo-andrefan'i Iran, nandritra ny fihetsiketsehana. Firenena manan-karena solika i Iran, saingy tsy ampy fahaiza-manao amin'ny fanadiovana solika izy ary tsy maintsy manafatra eo amin'ny 40 isanjaton'ny lasantsiny. Nisy ny hetsi-panoherana satria ny antony voalohany dia satria hatramin'izao dia zatra mameno vola hatrany amin'ny resaka lasantsy ny governemanta , izay tena tsy lafovidy mihitsy. Vokatr'izany, ambony dia ambony ny fanjifàna lasantsy ao Iran, ary maro ireo miankina amin'ny fiaran'izy ireo mba hanana nafidiram-bola. Araka ny filazan'ny  BBC, miezaka manakana ny fanjifàna solika araka izay azo atao i Iran mba hisorohana ny sazin'ny Firenena Mikambana noho ny fandaharan'asa nokleary ao amin'ny firenena.
Ity ny iray amin'ireo horonantsary  momba ny fanafihana ny tobin-tsolika izay navoakan'ny olom-pirenena Iraniana tao amin'ny YouTube.
Namoaka horonantsary maromaro mampiseho ireo mpanao fihetsiketsehana tezitra i Sheyda. Milaza ilay bilaogera fa nanatontosa ireo horonantsary ireo izy mba ho hitan'ny Iraniana monina any ivelany, satria, noho ny sivana ataon'ny governemanta, tsy afaka miditra ao amin'ny tranonkala malaza fizarana lahatsary YouTube  ny Iraniana ao anatin'ny firenena.
Rooznamehnegarno, bilaogera sady mpanao gazety nilaza  [tamin'ny teny Farsi] fa eo ampahamaiza noho ny fandoroana ireo tobin-tsolika tao Tehran. Nilaza izy fa mijery fotsiny izay zava-mitranga ireo olona marobe ary maka sary.
Nanoratra  [fa] i Jomhour fa, araka ny tatitry ny haino aman-jery, nosamborina ireo mpanao fihetsiketsehana miisa 80, na ireo olona nanafika ny tobin-tsolika. Araka ny filazan'i Jomhour, nilaza ireo solombavambahoaka mpandala ny mahazatra sasany tao amin'ny parlemanta sy ny tranonkalam-baovao sasany fa mpampihorohoro ireo olona ireo izay mikarama mba handrava tobin-tsolika, filazana izay nolazain'i Jomhour fa mahatsikaiky sy tsy mitombina. Nilaza i Jomhour fa ny zavatra hitanay raha ny marina dia fanehoan-kevitra manoloana ny fanapahan-kevitra tsy mitombina noraisin'ny governemanta sy ny tsy fahaiza-mitantanany. Nilaza koa izy fa tokony miala tsiny ny governemanta noho ireo fahavoazana nateraky ny fanapahan-keviny.
Nilaza  [Fa] i Razehno fa mbola nandray fanapahan-kevitra lehibe tampoka indray ny governemanta Iraniana: nanambara rafitra vaovao mikasika ny lasantsy ny governemanta ary niteraka fitohanan'ny fiara sy varo-maizina avy hatrany izany. Tamin'ny hevitr'i Razehno, ny fanapahan-kevitra tampoka noraisin'ny governemanta no tompon'andraikitra tamin'ny firohotra teny amin'ny tobin-tsolika sy niteraka korontana be dia be teo amin'ny mponina.
Mohammad Ali Abtahi, filoha lefitry ny firenena teo aloha, nilaza  [fa] fa manaporofo ity hetsika ity fa, amin'ny lafiny iray, tsy matoky ny governemanta ny vahoaka, ary etsy ankilany, mikorontana ny governemanta.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/13/101765/
 zatra mameno vola hatrany amin'ny resaka lasantsy ny governemanta: http://www.nowpublic.com/analysis_iranians_torch_gas_stations_protest
 Araka ny filazan'ny: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/6243644.stm
 iray amin'ireo horonantsary: http://www.youtube.com/watch?v=38YPbzMspbc%20
 Namoaka : http://shervingz.blogfa.com/post-193.aspx
 Nilaza : http://thespiritofman.blogspot.com/2007/06/petrol-crisis.html#links
 Nilaza : http://www.shima.blogspot.com/2007_06_01_archive.html#1245799403593078027#1245799403593078027